कैलालीका कुन पालिकामा कसको अग्रता ? | Ratopati
कैलालीका कुन पालिकामा कसको अग्रता ?
personरातोपाटी संवाददाता exploreकैलाली access_timeबैशाख ३१, २०७९ chat_bubble_outline0
कैलालीका १३ मध्ये ६ पालिकामा गठबन्धनका उम्मेदवारले अग्रता लगेका छन् ।
कैलाली गोदावरी नगरपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवारको अग्रता छ । यसैगरी चुरे गाउँपालिकामा गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीको अग्रता रहेको छ । यसैगरी गौरीगंगा नगरपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारको अग्रता रहेको छ ।
यसैगरी लम्कीचुहा नगरपालिकामा गठबन्धनबाट काँग्रेसका उम्मेदवारको अग्रता रहेको छ । घोडाघोडी नगरपालिकामा गठबन्धनबाट नेकपा एसका उम्मेदवारको अग्रता रहेको छ । जानकी गाउँपालिकामा पनि गठबन्धनका तर्फबाट काँग्रेसका उम्मेदवारको अग्रता रहेको छ । कैलालीको दुई स्थानीय तह बर्दगोरिया गाउँपालिका र भजनी नगरपालिकामा एमालेका उम्मेदवारको अग्रता रहेको छ ।
यसैगरी कैलारी गाउँपालिकामा राप्रपाका उम्मेदवारको अग्रता रहेको छ, भने टीकापुर नगरपालिका र जोशीपुर गाउँपालिकामा रेसम चौधरीकी श्रीमती अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अग्रता रहेको छ । सुदूरपश्चिमकै एक मात्र उपमहानगरपालिका रहेको धनगढी उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारको अग्रता रहेको छ । कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकामा भने मतपेटिका संकलन कार्य भइरहेको कैलालीका मुख्य निर्वाचन अधिकृत जयानन्द पनेरुले बताए ।